Muhiimadda Af-Soomaaliga iyo Halgankii loo soo galay | HalQaran.com
Home Opinion Muhiimadda Af-Soomaaliga iyo Halgankii loo soo galay
Mohamed Abdullahi Abdirahman, waa qoraaga Qormada /Halqaran News
Qormo (Halqaran.com) – Sida aan la wada socono qoraalka Afka Soomaaliga waxa uu soo maray maraaxil kala duwan. Laga soo bilaabo 1949kii, waxaa jiray iskudayo badan oo la rabay in lagu rasmiyeeyo qoraalka Afka Soomaaliga, balse midkii lagu rasmiyeeyey, oo lagu hirgeliyey , waxaa ku guuleystay Golihii Sare ee Kacaanka , 21kii Janaayo 1972kii.
Dowladdii kacaanka ee xukunka Dalka qabsatay 21kii Oktoobar 1969, waxyaabihii ay ballan qaadday waxaa ka mid ahaa qoraalka Af-Soomaaliga.
Hadaba dowladdii kacaanka iyadoo kaduuleyso ballan qaadkeedii ahaa qoraalka asfoomaaliga, waxay magacawday,21kii janaayo 1971kii , guddi ka kooban 23 xubnood oo loo bixiyey “ Guddiga Qoridda Af-Soomaaliga”.
Shariif Saalax Maxmed Cali Guddoomiye
Muuse xaaji Ismaaciil Galaal. Xubin
Sheekh Ibraahim Xaashi Maxamuud
Cabduraxmaan Nuur Xirsi
Mustafe Sheekh Xasan Cilmi
Maxamed Sheekh Xuseen “ Sheeka-xariir”
Xuseen Sheekh Axmed “ Kadare”
12- Axmed Cartan Hange
21- Maxamed Shire Maxamed “ Gaab”
Inuu dejiyo buugaagta Dugsiyada Hoose ee Dalka;
Inuu dejio buug Naxwaha afsoomaaliga ah;
Inuu dejiyo qaamuus Soomaali- Soomaali ah.
Guddigan wuxuu lahaa guddi-hoosaadyo, sida : Kan Qaamuuska, Midka Taariikhda & Juqraafiga, kan Cilmiga Sayniska, kan diyaarinta Buugaagta dugsiyada, iyo kan Naxwaha.
Axmed Cali Abokor
Cabdullaahi Xaaji Abuubakar, iyo
Maxamed Xasan Aadan “ Gahayr”
Guddi-hoosaadka Naxwaha & diyaarinta buugaagta Dugsiyada, waxaa ku qaybsanaa dhammaan xubnaha guddigu ka koobnaa.
Xubnaha Guddiga Qoridda Af-Soomaaliga waxaa ku jiray xubno ka mid ahaan jiray guddiyadii ay xukuumadihii hore ay magacaabi jireen, laga bilaabo 1961kii, waxaana ka mid ahaa xubnahaas:
Cabdullaahi Xaaji “ Insaaniya”
Xuseen Sheekh Axmed “ kadare” iyo
Mustafe Sheekh Xasan.
Xubnaha guddigu waxay u badnaayeen kuwa toos ugu tirsan Wasaaradda Waxbarasha, qaarna waxay madax ka ahaayeen, hay’ado hoos yimaada Wasaaradda, sida: Mudane Shariif Saalax Maxamed Cali oo waagaas ahaa Guddoomiyihii Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ( JUS), sharcigii lagu dhisay, oo jaamacad u dallacsiiyey, ay meel mariyeen Golihii Sare ee Kacaanka, bishii Diiseembar 1969kii, isagoon weli laba bilood jirsan.
Hadaba, Af-Soomaaliga maanta waxa uu marayaa meel khatar ku ah jiritaankiisa, maadaama muddo badan oo aan burbur iyo qaran-jab ku jirnay ay na soo martay, oo afka Soomaaliga, uu ula siman yahay sida ay u burbureen dhammaan wax allaale iyo wixii aan haysanay. Waxaan u baahanahay inaan u istaagno badbaadinta afkeenna Soomaaliga ah si aynaan u noqon ummad dhaqan guurta, waayo afku waa mid midka xanbaara ilbaxnimada , aqoonta iyo dhaqanka ay ummad leedahay.
Badbaadinta afsoomaaliga waxay si gaar ah mas’uuliyad ugu saarantahay hay’adaha Dowladda oo ay ugu horreeyaan Wasaaradda Waxbarashada iyo Akadeemiyada Afka iyo Suugaanta Soomaaliyeed. Waa muhiim hay’adahaas aan soo sheegay inay hormuud ka noqdaan ilaalinta ,meelmarinta iyo hirgelinta afka si uu ula tartamo afafka caalamiga ah ee dunida ka jira. Waxaa sidoo kale muhiim ah in dhammaan hay’adaha Dowladda, ay af-Soomaaligu u adeegsadaan xafiisyada, oo qasab laga dhigo adeegsigiisa, waayo waxaad arkeysaa in xafiisyadii dowladda ee la rabay inay hormuud ka noqdaan hirgellinta afka, in ay iyagiiba adeegsan, oo taa beddelkeed ay luuqado qalaad u isticmaalaan shaqo maalmeedkooda sida : Emailada iyo qoraalada kale ee la isku diro.
W/Q: Mohamed Abdullahi Abdirahman
Halgankii loo soo galay